Xa abahlobo bakho abasenyongweni befuna ukuba ugonywe ...
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ukwaphula iindaba zase-US » Xa abahlobo bakho abasenyongweni befuna ukuba ugonywe ...
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukwaphula iindaba zase-US • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Education • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
iintsuku 3 eyadlulayo
Abantu baseMelika balahla abahlobo ngaphezulu kogonyo lwe-COVID-19
I-poll ibonise ukuba i-97% yabantu abagonywayo bacinga ukuba abo babengabahlobo babo "njengabantu abachasene ngokupheleleyo ne-vaxxers" kwaye bathi abanakuze babenze baqonde ukubaluleka kokudubula.
I-14% yabantu abagonyiweyo baseMelika baye baxhamla ubuhlobo kunye nabantu abakhethe ukuphuma kugonyo.
I-81% yabaphenduli bophando lweDemokhrasi bathi bagonywe ngokupheleleyo.
I-64% yabaphenduli bophando lweRiphabhlikhi bathi bagonywe ngokupheleleyo.
Uvoto olutsha kwilizwe lonke, olwenziwe ebutsheni bangoSeptemba, luveze ukuba i-16% yabemi baseMelika abathathe inxaxheba kuvavanyo baphelise ubuncinci ubuhlobo abathathu kulo nyaka uphelileyo onesiqingatha. Phantse i-14% yabantu baseMelika abagonyelweyo bathi banxibile ubudlelwane kunye nabahlobo abakhethe ukungagonyelwa i-COVID-19.
Abantu baseMelika bebelahla abahlobo babo ebomini babo ngexesha leengxaki ze-coronavirus, kwaye kwabo bakhethe ukufumana i-jabbed, izikhundla zabahlobo kugonyo lwe-COVID-19 yayihlala iyinto eyaphula ubudlelwane.
Ngapha koko, abagonyo abaphenduliweyo baphantse baphindaphindwe kane amathuba abo bangenanjongo yokufumana i-jabs-66% ukuya kwi-17% -ukuphelisa ubuhlobo ngexesha lobhubhane. I-poll ibonise ukuba i-97% yabantu abagonywayo bacinga ukuba abo babengabahlobo babo "njengabantu abachasene ngokupheleleyo ne-vaxxers" kwaye bathi abanakuze babenze baqonde ukubaluleka kokudubula.
Ugonyo lwe-COVID-19 yenye yezona zinto zahlulahlula ukuqhuba ukudibana phakathi kwamaMelika. I-14% icacise i-jabs njengesizathu sokuphelisa ubuhlobo xa kuthelekiswa ne-16% etyhola ukungafani kwezopolitiko kunye ne-15% ye-pal yangaphambili eyayithandana neqabane langaphambili. Ezinye izizathu zibandakanya ukufumanisa ukuba abahlobo babo ngamaxoki (iipesenti ezisi-7) kwaye ukuba nabahlobo benza amabali ngabo (iipesenti ezili-12).
IHollywood iyabonakala ukuba iyisikelele umbono wokulahla abahlobo abala ukuya kugonywa. Umlingisi uJennifer Aniston - ngokuhlekisayo, inkwenkwezi kumdlalo kamabonakude 'Abahlobo' - uthe kwinyanga ephelileyo kudliwanondlebe lwe-InStyle ukuba ubuphelisile ubudlelwane nabantu abangafuniyo ukungxoliswa okanye bakhethe ukungamxeleli inoculation. Ulihlazo lokwenene, utshilo. “Ndiphulukene nabantu abambalwa kwinkqubo yam yeveki.”
Umlingisi uJennifer Aniston
Inqanaba lesitofu sokugonya liye landa kwiiveki ezidlulileyo. Kutshanje u-radio u-Howard Stern ubethe "zonke iindlela zelizwe lethu ezingazukugonywa" kwaye wathi abo bangazifumaniyo ii-jabs kufuneka bavinjelwe iibhedi zesibhedlele ukuba bayagula. "Hlala ekhaya, fela apho kunye ne-COVID yakho," utshilo.
Umsasazi omkhulu weRadio Howard Stern
INew ithe iipesenti ezingama-81 zabaphenduli bophando lwentando yesininzi zagonywa ngokupheleleyo, xa kuthelekiswa ne-64% yamaRiphabhlikhi kunye ne-69% yabazimeleyo. Malunga ne-57% yamaRiphabhlikhi kunye ne-41% yamaDemokhrasi athi uluntu "lubaluleke kakhulu" kubantu baseMelika abangagonywanga.
Ukunyamezelana nokuzimela kweyeza lokugonya kuyehla kwi i-USA, njengoko uMongameli uJoe Biden kwiveki ephelileyo eyalele onke amashishini anabasebenzi abali-100 nangaphezulu ukuba banyanzelise abasebenzi babo ukuba bafumane izithonga. "Sibe nomonde, kodwa umonde wethu unxibe kancinci, kwaye ukwala kwakho kuxabise thina sonke," utshilo uBiden ngabantu baseMelika abangagonywanga.
UHarry Johnson ubengumhleli wesabelo eTurboNews phantse iminyaka esi-20.
UHarry uhlala eHonolulu, eHawaii kwaye ngowokuqala evela eYurophu.
Uyakuthanda ukubhala kwaye ebegubungela njengomhleli wesabelo eTurboNews.
ISkal Roma kunye neSkal Bucharest: Ukudubula kokuqala kweSkal ...
Ukuqalisa ngenqwelomoya ukuya ku-Agasti: Iirekhodi zaseSeychelles zibalaseleyo ...
IKhosi eNtsha yoTyelelo lweBahamas
UFlynas ubhengeza ukulibaziseka kwenqwelomoya ngqo phakathi kweKSA ...
IGrand Canyon e-Oman yongeza ukubuk 'iindwendwe kwaseThai nge ...
Oogqirha base-UK basihlaba isigqibo sokuphakamisa yonke i-COVID-19 ...
Abasebenzi boKhenketho baseJamaica abangama-50,000 babuyele eMsebenzini ekugqibeleni ...
IGeorgia iyingozi kubakhenkethi be-LGBTQ ngekratshi: UNWTO SG ...
I-Afrika uMda oMtsha wezoKhenketho: Iintetho ngeNigeria ...
IRussian Convention Bureau Yazisa i-CEO eNtsha
I-Qatar Airways iphawula iminyaka eli-10 yeenqwelo moya zaseCanada
Imigca yomoya eDelta yongeza ama-36 asetyenzisiweyo e-Airbus kunye neBoing ...
Qeqesha + Umoya: UMoya waseFrance uqinisekisa ukuzibophelela ...
IZiko loKomeleza uKhenketho kwiHlabathi liphela lizibophelele ekubuyiseleni ...
IBilly Bishop yaseToronto kwiSikhululo senqwelomoya ukuze iqhubeke nentengiso ...
IAtlantic Canada Ivula Abakhenkethi base-US abagonyelweyo
Abathathi-nxaxheba abangama-20 base-Eswatini bazisa uluhlu lwezixhobo kwi-SADC ...
I-UNWTO iququzelela ingqungquthela yokuqala yoKhenketho yoLutsha kwi-Global ...
Ibali lethu loThando kunye neIqithi zaseSychelles ezihle
I-Sandals Resorts International ikhumbula umsunguli ...
I-Emirates isungula iDaily New ukuya eMiami Flight
UBartlett udumisa iNCB kuphehlelelo lweMpendulo yoKhenketho ...
INew Zealand iyavalwa kwilizwe liphela ngaphezulu kwe-COVID enye ...
ILufthansa Group yazisa ngeCEO entsha yeAir Dolomiti
Ukusuka eSan Francisco ukuya eHonolulu: Ezona zixeko zibalaseleyo ...
I-India yoKhenketho kunye nezoKhenketho ziyadilika
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica Ukhuthaza abasebenzi boKhenketho ukuba bafumane ...
Ulawulo lweBiden lukhuthazwe ukuba lukhawuleze ukuvulwa kwakhona kwe-US
Abakhenkethi kunye nabahlali kufuneka babonise uxinzelelo / uvavanyo olubi ...
Bopha isihlalo seBelt okanye iTape yeTape: Ukhuseleko lweNqwelomoya entsha ...
Ukutshintsha kwemozulu kuyinyani eFlorida Condo Collapse ...
Ngaba ukuhlawula ixesha elide kuyichaphazela njani inqaku lakho letyala?
IVirginia iAtlantic isungula iiNdiza eziPhinda-veki ngeVeki eziya e ...
IATA: Irhafu ayisiyo mpendulo kuZinzo lokuhamba
I-Chorus Aviation Inc.ibhengeza unyulo lwaBalawuli
Abahambi abangafumanekanga abavela e-UK, eSpain, ePortugal ...
Iimbadada, iWyndham, iMarriott kunye neHilton: iAmerican ...
Ukuhamba ngesikhephe eBahamas ngeHlabathi ngoku kuhamba ngegiya epheleleyo